Home News Jawaari oo u sheegay beesha Caalamka in Baarlamaankii Soomaaliya burbur ku dhaw...
Jawaari oo u sheegay beesha Caalamka in Baarlamaankii Soomaaliya burbur ku dhaw yahay
Gudoomiyahii hore ee Baarlamaanka oo safar shaqo ah ku jooga magaalada Nayroobi ee dalka Kenya ayaa halkaas kulamo gooni gooni iyo mid wadareed ah kula qaatay qaar ka mida beesha caalamka. Iyada oo maalinba maalinta ka dambeeysa ay soo kordhayso wal-walka laga qabo jiritaanka dowlada Soomaaliya, ayaa gudoomiye Jawaari waxaa u yeeray wadamada caawiya Soomaaliya si ay go’aan uga qaataan sii socodsiinta kaalmada la siiyo Baarlamaanka iyo hay’adaha dowladda . Gudoomiye Jawaari ayaa si aan ka leex-leexad lahayd u sheegay in Baarlamaankii Soomaaliya uu qarka u saaran yahay in uu burbur ku yimaado. Gudoomiye Jawaari ayaa sheegay in hay’adii kaliya ee ugu muhimsan hay’adaha dowlahliga ah ee waqtiga badan la galiyay in la soo dhiso uu u muuqdo mid si ku talagal ah loo burburiyo.
Waxaa maalinba maalinta ka danbeeysa isa soo taraya walwalka laga qabo in Baarlaamka Soomaaliya uu noqdo howlgal. RW Kheyre oo istcimaalaya lacagtii shacabka laga soo ururiyay ama lagu keenay magac Soomaaliyeed ayaa bilaabay in uu laaluush ku bixiyo sidii baarlamaanka Soomaaliya loo kala diri lahaa. Arintaan ayaana keentay in beesha caalamku ay si dhaqso ah u soo faragaliso xaalada adag ee dalku sii galaayo. Asbuuca soo socda ayaa wafdi balaaran oo ka socda beesha caalamka kula kulmi doonaan MW Farmaajo magaalada Muqadishu si ay si uga gudbiyaan fartiin kama danbeeys ah.
Previous articleAMISOM oo qorsheynayso in ay howlgaladeeda wax ka badasho! qorshe nocee ah?
Next articleCabdiwali Muudeey oo afka furtay: Dalka sidaan laguma fiirsan karo!
Muuse Biixi oo weerar afka ah ku qaaday DFS
Magacyada Dad badan oo wali laga baadigoobayo Gudaha wabiga Shabeelle (AKHRISO)